FALANQEYN: Soomaaliyada Cusub Ma tahay eray Bixin laga fiirsaday? – Puntlandtimes
FALANQEYN: Soomaaliyada Cusub Ma tahay eray Bixin laga fiirsaday?
December 3, 2017 W LAASCAANO
MUQDISHO(P-TIMES)- Xaafiiska Raysalwasaaraha dawladda Faderaalka Soomaaliya ayaa daabacay boor ama warqad weyn oo lagu qoray Erayga SOOMAALIYADA CUSUB, taas ayaa kaliftay in si weyn loogu falanqeeyo baraha Bulshada iyo Saxaafadda Soomaalida.
Si weyn ayaa loo rog-rogey ula jeedada laga leeyahay Eraygan, waxaana Falanqeeyaasha qaarkood ay sheegeen in aad moodo in la gaaray Doorashadii 2021-kii, taas oo ay ula jeedaan in loo muuqdo waqtigii Ole-olaha.
Wasiiru dowlaha Wasaaradda Warfaafinta, Hiddaha, Dhaqanka Iyo Isgaarsiinta ee dawladda Puntland Cabdifitaax Nuur Ashkir oo ah khabiir qore ah, in badana qoraalo ka sameeyey xaaladda wadamada Caalamka iyo Soomaaliya-ba ayaa falanqeyn kooban ka sameeyey Erayga Soomaaliyada cusub.
1:Ethopiada aan dariska nahay markii Xisbiga talada haya yimid Xukunka “EPRDF”1991-dii wuxuu ku dhawaaqay “Ethiopia-da Cusub” oo macnaheedu ahaa: Ethopia hal Aragti leh oo talada dalka ay ka arimiyaan dhammaan qowmiyadaha daga,kaniisadda iyo Siyaasaddana la kala furo “Calmaaniyad”.